आकाशको 'ड्रिम गर्ल' आश्मा !!! – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentआकाशको ‘ड्रिम गर्ल’ आश्मा !!!
काठमाण्डौ : चलचित्र ‘ड्रिम गर्ल’ निर्माण हुने भएको छ। बिहीबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै चलचित्रको निर्माण घोषणा गरिएको हो। ‘आर.बि.मुभिज’ र ‘रिल एण्ड रियल सिनेमा’को सहकार्यमा निर्माण हुन लागेका चलचित्रलाई ऋषि राज आचार्यले निर्देशन गर्ने भएका छन्। प्रेमकथामा आधारित रहेको निर्माण हुन लागेको चलचित्रमा अर्जुन शर्माको लगानी रहने छ।
आकाश श्रेष्ठ, आश्मा गिरी, सरोज खनाल, बिल्सन विक्रम राई, लक्ष्मी गिरी लगायतका कलाकारको अभिनय रहने चलचित्रमा अर्जुन पोखरेलको संगीत सम्राट बस्नेतको एक्सन, गम्भीर बिस्टको नृत्य निर्देशन रहने छ। चलचित्रको छायाङ्कन रारा ताल, मुस्ताङको साथै दुबई र कतारमा हुने निर्माण पक्षले बताएको छ।